Ndị ụgbọ elu Southwest malitere nyocha banyere onye ọkwọ ụgbọ elu na-akparị Biden
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụgbọ elu Southwest malitere nyocha banyere onye ọkwọ ụgbọ elu na-akparị Biden
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Southwest butere nyocha banyere onye ọkwọ ụgbọ elu na-akparị Biden.
Nkwa Southwest ikwu okwu ozugbo na onye ọrụ a na-ajụ ajụjụ, na-eso nyocha nke ime, kpalitere nkwughachi azụ karịa na ịchọ nkwupụta siri ike na ime ihe.
Southwest anaghị anabata ndị ọrụ na-ekerịta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onwe ha ka ha na-arụ ọrụ na-ejere ndị ahịa ozi.
Ụfọdụ kpọkuru ndị Federal Aviation Administration ka ha tinye aka na nyocha ahụike uche onye ọkwọ ụgbọ elu.
Ụgbọ elu ahụ nwekwara oke nkatọ nke nkatọ sitere n'aka ndị nchekwa, maka ebubo na ha "na-atụ ndị otu n'aka ekpe egwu."
Nkebi ahịrịokwu nje a na-akparị Onye isi ala US Joe Biden ebutela nyocha nke ime nke ndị ụgbọ elu Southwest.
Ụgbọ ala Dallas kwuputara na ọ malitela nyocha nke ime mgbe otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọ elu ya ji mkpụrụokwu 'Let's Go Brandon' bịanye aka n'agbanyeghị na ọ na-ekwu okwu.
"Southwest anaghị anabata ndị ọrụ na-ekerịta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onwe ha mgbe ha na-arụ ọrụ na-ejere ndị ahịa anyị ozi, na e kwesịghị ịkọwa echiche nke onye ọrụ dị ka echiche nke Southwest na ndị ọrụ 54,000 na-arụ ọrụ," Southwest Airlines kwuru na nkwupụta ụnyaahụ.
Ihe kpatara esemokwu ahụ bụ akụkọ na onye na-anya ụgbọelu na a Southwest Airlines Ụgbọ elu si Houston, Texas gaa Albuquerque, New Mexico na Fraịde kwuru, 'Ka anyị gaa Brandon' n'agbanyeghị na igwe okwu - meme mgbanwe aka nri na-adịbeghị anya nke ghọrọ koodu maka okwu rụrụ arụ na-eduzi na Democratic ugbu a. Onye isi ala US Joe Biden.
Dị ka onye nta akụkọ AP Colleen Long si kwuo, bụ onye mere na ụgbọ elu ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ wepụ ya mgbe ọ gbalịrị ịjụ onye na-anya ụgbọelu banyere iji nkebi ahịrịokwu ahụ.
Nzaghachi nke ụgbọ elu ahụ siri dị ka adịghị ike maka ihe ahụ merenụ mere ka ọtụtụ ndị na-akpọ oku ka a mara onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ n'ihu ọha ma chụọ ya n'ọrụ, ebe ndị ọzọ na-akpọ oku ka ha chụpụ ụgbọ elu n'ozuzu ya. Ụfọdụ gara n'ihu iji tụnyere nkwupụta mmegide Joe Biden na-ekwupụta nkwado ya na ndị na-eyi ọha egwu.
Ụfọdụ kpọkuru ndị na-ahụ maka ụgbọ elu nke Federal ka ha tinye aka na nyocha ahụike uche onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ.
Southwest ụgbọ elu nwekwara oke nkatọ nke ndị na-achọghị mgbanwe, maka ebubo na ha “na-atụ ndị otu nku aka ekpe egwu.”
Prof. Dea Mallin ekwu, sị:
November 1, 2021 na 17: 17
Njikere! Njehie mkpoputa!
N'otu n'ime akụkọ dị na mbipụta a, onye na-edezi gị emebiela mkpụrụokwu ahụ, "brouhaha."
Nke a bụ okwu French pụtara "mkpasu iwe.
Onye ndezi gị sụpere ma ọ bụ kwe ka asụpe ya “bruhaha” nke na-agaghị ekwe omume na French.